Home Wararka Wararkii ugu danbeeyay qaraxii ka dhacay deeganka Coomaad ee Gobol Hiiraan
Wararkii ugu danbeeyay qaraxii ka dhacay deeganka Coomaad ee Gobol Hiiraan
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya deegaanka Coomaad ee hoos-taga Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan waxaa halkaas ka dhacay qarax xoogan oo saameeyay guud ahaan degaanka Coomaad.
Sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal qaraxa ayaaa ahaa noca miinada dhulka lagu aaso, waxa uuna qaraxa uu haleelay sida ay ciidamada Xoogga sheegen gaari ay saarnaayeen xubna ka tiraan Al-shabaab. War qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada xoogga dalka ayaa lagu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 15 ka mid ah ururka Al-shabaab.
“Dadka Deegaankaasi ku nool ayaa Warbaahinta Ciidamada u xaqiijiyay in ay arkeen dhimashada 15 kamid ah Maleshiyaadka Argagaxisada Alshabaab iyo dhaawac intaasi kabadan, waxaana guud ahaan qaraxa uu bur buriyay gaarigii Maleeshiyaadkaasi ay saarnaayeen”, ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidamada dowladda.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in qaraxan lagu aasay wadada lana qorsheynayay in lagu wax yeeleyo ciidanka xoogga. Waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa sii kordhaya qaraxyada iyo weerarada ay soo qadayaan Ururka Al Shabaab ee ku sugan deegaano badan oo hoosyimaada Galmudug.
Previous articleThe killer-in-chief should be forced to resign before it’s too late
Next articleNatiijadii imtixaanaadka Hir-Shabelle oo la soo bandhigay
Qaraxyo ka dhacay deegaanka Awdheegle
Dagaal ka dhacay deegaano dhaca gobolka Baay